५ दशकसम्म अ’विवाहित यी अभिनेत्री – eSidhakura
४१ seconds अघि
भारतीय पक्षबाट नेपाल भ्रमण बढिरहेका बेला किन आउँदै छन् चि’नियाँ दू’त ?
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय५ दशकसम्म अ’विवाहित यी अभिनेत्री
५ दशकसम्म अ’विवाहित यी अभिनेत्री
१ दिन अघि प्रकाशित
काठमाडौं– बलिउड स्टार आफ्नो जीवनलाई आफ्नै इच्छा अनुसार बा’च्न चाहन्छन् । आम मानिसको भन्दा फरक जी’वनशैली बिताउने यी कलाकारलाई उमेर ढल्के पनि विवाह गर्ने सो’च प’लाउँदैन ।आजकल अ’क्सर महिलाले ३० बर्षको आसपासमा विवाह गर्दछन् । बलिउडका यस्ता केहि अभिनेत्री छन् जसको ४०/५० बर्षको उमेरसम्म विवाह भएको छैन । आज हामी बढि उमेरसम्म पनि विवाह नगर्ने बलिउड अभिनेत्रीका बारेमा चर्चा गर्नेछौ ।सन् १९९० बाट फिल्म बागी मार्फत बलिउडमा प्रवेश गरेकि चर्चित अभिनेत्री नगमा अहिले रा’जनीतिमा स’क्रिय छिन् ।
उमेरले ४५ का’टेकि यी अभिनेत्री अझै अविवाहित छन् ।बलिउडमा राम्रो अभिनेत्रीका रुपमा छवि बनाएकि अभिनेत्री तबूले फिल्म विजयपथबाट बलिउडमा प्रवेश गरिन । उमेरले ४९ लागेकि त’बु अझै अ’विवाहित छिन् । उनले दुई पटक भा’रतीय राष्ट्रिय पुरस्कार र ६ पटक फि’ल्मफेयर जितेकि छन् ।पूर्वमिस यूनिभर्स सुष्मिता सेनले समेत अझैसम्म विवाह गरेकि छैनन् । हुनत हाल उनी रो’हमन श’लसँग डे’टमा छिन् । जसले चाडैँ विवाह हुनसक्ने अ’नुमान गर्न सकिन्छ । तर ४४ वर्षीय सुष्मिता अविवाहित नै हुन् । उनी ए’डोप्टद्धारा लिइएका दुई छोरीकी आमा हुन् ।
सुपरहिट फिल्म क’हो ना प्यार है, ग’दर लगायतका फिल्मबाट बलिउडमा त’हल्का मच्चाउन सफल अभिनेत्री अ’मीषा पटेल समेत अझैसम्म अविवाहित छन् । ४४ वर्षीय अमीषा अझै पनि बो’ल्ड अवतारमा फिल्ममा देखा पर्दै आएकि छन् ।ब’लिउडकी चर्चित अभिनेत्री काजलकी बहिनी तनिषा मुखर्जी ४२ बर्षसम्म पनि अविवाहित नै हुन् । उनले बलिउडमा स’फलता पाउन सकिनन् । एकताका उनको नाम उ’दय चोपडा र अ’रमान कोहलीका साथ जो’डिएको थियो । तर उनको विवाह भने भएन ।
कोरोनाका कारण पाकिस्तानका शैक्षिक संस्थाहरु फेरी ब’न्द, परीक्षा स्थ’गित
कोरोनाबि’रुद्धको बेलायती भ्या’क्सिनपनि ९० प्रतिशत प्र’भावकारी
पी’डामाथि पी’डा ! ए’उटै व्य’क्तिलाई म’लेरिया, डें’गु र कोरोना, उनैलाई को’बरा स’र्पले टो’क्यो
काम पाइने आशमा दलालमार्फत भि’जिट भिषामा दुबई आउँदै हुनुहुन्छ ? एक पटक अबश्य पढ़नुहोस
हास्य कलाकार भारती सिंह र उनका पतिलाई ज’मानतमा छा’ड्न अ’दालतको अ’नुमति
हा’र्दिक बधाई: बेलायती सेनामा क्या’प्टेन बन्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन् पोखराकी अंशु